Scatta la foto al Santo Sepolcro e appare Gesù Risorto (foto originale) | Ilblogdellapreghiera
Were foto nke Sepulcher Holy na Jizọs bilitere n’ọnwụ pụtara (foto mbụ)
Paolo Tescione	Edere ya Maggio 1, 2020 Maggio 2, 2020
(zoo aka na foto dị n'okpuru - foto mbụ abụghị foto montage - ọbụlagodi tụgharịrị na blọọgụ anyị na nkwupụta eziokwu a)
You chọrọ ịhụ ihe dị oke ịtụnanya? N'afọ gara aga, otu ndị njem ala mmụọ (gụnyere P. Calloway na Jim Caviezel) so ha gaa Holy Land. Na Mee 4, 2019, nnukwu ìgwè ndị njem ala nsọ mere ka Stations nke Cross dị anya ma rute Holy Sepulcher (ili nke Jizọs Kraịst) obere oge mgbe elekere isii nke elekere. Tupu emepee ọnụ ụzọ Holy Holy Sepulcher ka ndị nchụàjà nwee ike ịbanye ma mee Edisana Nsọ nke Mass ahụ, otu n'ime ndị njem ala nsọ were foto nke ihu ili ahụ. E mechiri ọnụ ụzọ ili ahụ. Nna Calloway dị nso n’ebe onye na-ese foto nọ foto ahụ ma gbaa akaebe na emechiela ụzọ. Lee ihe pụta na foto ahụ! Na montage nke foto, aka nri dị elu na-egosi ihe onye ọ bụla na-ahụ n'ụtụtụ ahụ (ọnụ ụzọ mechiri emechi nke ili ahụ). N'aka ekpe bụ ihe pụtara na otu n'ime foto dị n'ụtụtụ ahụ! Na ala ala aka nri bu ihe nlere nke oma.
Ọ bụ ihe na-adọrọ mmasị ịmara na akụkọ omimi Anna Catherine Emmerich dị omimi kọwara nke a banyere Onyenwe ya bilitere n’ọnwụ nne ya: “Ahụrụ m Onyenwe anyị bilitere n’ọnwụ egosila nne ya dị ngọzi n’Ugwu Calvary. Ọ karịrị ya ma dị ebube, ụzọ ya juputara na ịdị njọ. Uwe ya, nke dị ka uwe elu na-acha ọcha nke a tụbara n'akụkụ aka ya, na-efegharị n'ikpere n'azụ ya ka ọ na-aga. Ọ na-acha anụnụ anụnụ na ọcha, dị ka anwụrụ ọkụ na-agbọ ụja anwụ. "
Ikwere! Jizọs Kraịst bilitere na ndị nwụrụ anwụ! Ansa na Onyankopɔn reba asase so no, na ɔwɔ ahotoso sɛ Yehowa bedi ne bɔhyɛ so.
Ekele dịrị gị maka ịhazi ọgbakọ onyonyo na ntughari si Anne Catherine Emmerich.
← Na post gara aga Gara aga post:San Giuseppe Lavoratore arụkwaghị ọrụ
Ọzọ Post → Post ozo:Nwatakịrị nwoke nke dị afọ isii na-ekpe ikpere ikpere ya n'okporo ụzọ maka njedebe nke coronavirus na-apụta